I-Semalt ichaza ukuthi kungani kufanele ugweme ukuchofoza "Ungazikhipheli" ku-Ifolda Yesigaxekile
Sonke sithola ama-imeyili amaningi angafuneki futhi acasulayo nsuku zonke, futhi ukuwahlanza noma ukuwahlunga ngokuchofoza inkinobho yokungabhalisi okwanele. Amanye ama-imeyili atholakele angaqukatha izixhumanisi ezisolisayo ukuthi maduzane zibe inkinga enkulu kuwe. Amathuba wukuthi uzophela ukunikeza ulwazi oluningi mayelana nogaxekile, njengemininingwane yakho yekhadi lesikweletu, i-ID ye-PayPal, igama lomsebenzisi, iphasiwedi, ikheli lekhaya, inombolo yocingo kanye nekheli lebhizinisi lakho. Futhi, ungabanika amathuba okuthelela uhlelo lwakho nge-malware namagciwane. Yiqiniso, akuwona wonke umuntu okuthumelela i-imeyili uyisihlamba noma isichotho. Uma wazi umthumeli ngokwakhe futhi ukholelwa ukuthi uyathembeka, ungavula ngokuphepha futhi ufunde ama-imeyili akhe njalo - lente iridium oakley.
Lapha, uMax Bell, i- Semalt iMenenja yeNtuthuko yeMakhasimende uye wakhulisa izizathu zokuthi kungani ukungazibhalisi emaphephandabeni noma ema-imeyli okukhangisa kungakulimaza:
1. Uqinisekisile ikheli lakho le-imeyili ku-hacker:
Iningi labantu abazi ukuthi ngokuchofoza inkinobho yokuzihlukumeza kungaba yingozi kubo ngoba baqinisekisa kubaduni ukuthi amakheli abo e-imeyili ayasebenza futhi asebenzayo. Ngokwesibonelo, uma umthumeli ehilelekile ekusakazeni i-malware kwi-intanethi futhi uchofoze isixhumanisi sakhe ngephutha, uzokwazi ukuthi i-ID yakho isebenza futhi uhlola ama-imeyili akho njalo. Okubi kakhulu ukuthi manje uzothola okuningi kwama-imeyili avela ku-spammers, abafuna ukukhohlisa..
2. Ubonisa isithakazelo ekunikezeni kwabo:
Uma usuqhafaza kuleyo nkinobho yokuzihlukumeza, uzovumela abakwa-spammers ukuthi ufunde ama-imeyili abo futhi unentshisekelo ekunikezeni kwabo. Uma kunjalo, bazoqhubeka bethumela imiyalezo eminingi nangaphezulu. Ukufunda ama-imeyili abo nokuvula okunamathiselwe kwabo kuzoba okudingekile kuwe. Uma kungenjalo, bazosongela ukuthi usakaze imininingwane yakho yangasese kwi-intanethi. Okubaluleke kubo kuyimali yakho, futhi bangenza sengathi bayinkosikazi yangaphandle bese becela usizo.
3. Ungase ungatholi ama-imeyili kusuka kubangani nomndeni wakho:
Abahlaseli noma abagaxekile bangase banqande amakheli akho e-imeyili ngemilayezo yawo; kusho ukuthi ngeke ukwazi ukuthola ama-imeyili kusuka kubangani bakho, amakhasimende, namalungu omndeni. Yingakho kufanele ucabange kathathu ngaphambi kokuchofoza inkinobho yokuzihlukumeza ngoba amathuba ukuthi bayokuthumela i-malware, ikhohlisa i-ID yakho ye-imeyli ukuze uthole ama-imeyili awo ngaso sonke isikhathi futhi ivimbele ukufika kwama-imeyili kusuka kumbuthano wakho.
Ngivumele lapha ngitshele ukuthi ukuchofoza inkinobho yokuzihlukumeza kungase kube ukukhwabanisa futhi ikheli lakho le-imeyili ngeke lisuswe ohlwini lwabagaxekile. Noma kunjalo, ungakwazi ukulandela lezi zinyathelo ukuvimbela ama-imeyili angakucasula esikhathini esizayo: Qinisekisa ikheli le-imeyli le-spammer futhi ungachofoli kuleyo inkinobho yokuzihlukumeza uma i-imeyili isifike kufolda yakho yogaxekile. Thatha izinyathelo ngokushesha bese ufake uhlelo lokulwa ne-malware. Ukulanda uhlelo olunjalo kusuka kwi-intanethi kulula kakhulu.